10 Ndi Naijiria Ibido Na-ewepụta Ihe Ngwọta Na Mmemme INOVO Accelerator Program
10 Nigerian Startups kpughere Solutions na iNOVO Accelerator Program
Ihe omume a bụ atụmatụ gọọmentị UK iji kwado mbido 10 iji nweta ikike iwulite ikike, ndụmọdụ, na ọkwa nye ndị ọkachamara ụlọ ọrụ, ndị mmekọ gọọmentị.
Ezubere iji nye ndị mbido nke Nigeria ike na-edozi nsogbu ndị sitere na ọrịa COVID-19, gọọmentị UK, na Jenụwarị site na UK-Nigeria Tech Hub ulo oru ọ bụ iNOVO Accelerator Program maka 10 mmalite-mmalite amalite ụlọ na-agbanwe agbanwe agbanwe ihe ọhụrụ iji dozie nsogbu ndị COVID-19 kpatara na ngalaba Education, Agriculture and Health in Nigeria.
Na mmekorita ya na StartupBootcamp Afritech na Ventures Platform dị ka ndị mmekọ na-emejuputa atumatu, usoro mmemme a nke ọnwa 3 nyere ndị mmalite 10 ahọpụtara ohere iji nweta ikike ikike ma mụta ọzụzụ mmalite, ndụmọdụ, na nkwado iji bulie ngwaahịa ha na ụdị azụmaahịa ha ngwa ngwa.
Ndị mmalite 10 kachasị gafere EdTech, AgriTech na HealthTech nwetakwara ohere iji kwado ihe ngwọta ha site na ndị na-anya ụgbọ elu na akaebe nke njikọta echiche ma jiri nghọta ọhụrụ ha mee ngwa ngwa na ogo.
Emere ihe a niile site na enyemaka nke ndị ọchụnta ego raara onwe ha nye, ndị ndụmọdụ, ndị itinye ego, na ndị ọkachamara ụlọ ọrụ. Iji mechie mmemme ahụ, mmalite ndị a wee nweta ohere ịga n'ihu ndị na-ege ntị gụnyere ndị na-etinye ego, ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị gọọmentị na mmemme mmemme ụbọchị ngosi.
Usoro nke abụọ nke usoro ihe omume ahụ bụ iji nye nnukwu ahụmịhe mmụta maka mmalite ndị ahọpụtara nke enweghị ike ịbelata mmemme ahụ.
N'ime ngụkọta nke ngwa 750 enwetara, UK-Nigeria Tech Hub kwadokwara ndị mbido 100 site na ọdọ mmiri nke ngwa enwetara iji nweta oge ndụ na ikpo okwu Accelerator Squared ebe enyere ha nghọta na modulu ndị dị mkpa iji nyere ha aka iwulite ngwaahịa. na ụlọ ọrụ iji nweta mmetụta.
Ndi oru a nwere nnukwu ntuputa site na ikpo okwu nke Accelerator Squared-akwụkwọ mkparịta ụka na-emekọ ihe ọnụ nke na-enye ndị mbido mmalite nwere ihe karịrị iri na abụọ modulu gụsịrị akwụkwọ iji nwee ike ịga n'ihu n'oge ọ bụla nke mbido njem bụ akụ bara uru nke nyere aka nyere ha aka ịhazi usoro azụmahịa ha.
Onye isi obodo na-ahụ maka oge UK-Nigeria Tech Hub, Lamide Johnson kwuru, sị:
"Impacthụ mmetụta dị egwu nke mmemme a maka ndị mmalite na-esonye bụ ihe akaebe na eziokwu ahụ bụ na ọ bụrụ na anyị chọrọ inye ohere maka ihe ọhụrụ iji dozie ụfọdụ nsogbu tara akpụ chere na Nigeria, a na-eme ọtụtụ mmemme dị ka nke a iji nye ihe dị mkpa ozi, netwọkụ na nkwado maka mmalite mmalite usoro na-arụpụta ihe ngwọta ọhụụ.
“Site na mmemme a, anyị hụrụ ozugbo mkpa ọ dị ịkwado na inyekwu bọọdụ maka mmiri maka mbido ndị na-amalite mmalite iji bulie mmetụta ha.”
N’ikwu okwu banyere ihe mmemme ahụ, ụfọdụ n’ime ndị mbido iri nyere nzaghachi dị ịtụnanya banyere etu mmemme iNOVO Accelerator siri nwee mmetụta na Startups ha.
Onye isi ndi Schoola Abdul Bature, kwuru, sị: “Ọ bụ ihe ịrịba 3 ọnwa nke ịrụsi ọrụ ike. Site na enyemaka nke StartupBootcamp AfriTech na Ventures Platform, usoro mmụta anyị nke gamified maka ụlọ akwụkwọ sekọndrị na nke praịmarị jisiri ike nweta uche nke ndị mmekọ ụlọ ọrụ na ndị ọrụ oke mkpa.
Nke dugara na mmekorita ya na Nigerian Turkish International Colleges na onboarding of 25 other partners. ”
Na-aga n'ihu na nke a: Damilola Olaopa, CEO nke Foodbank.ng, mmalite ọrụ mbinye ego nri, kwuru na site na mmemme ahụ, ndị otu ya jisiri ike leverage mmekọrịta mmekọrịta iji nweta nkwado achọrọ.
“Mkpakọrịta anyị mere ga-enyere anyị aka ịbawanye arụmọrụ anyị ọsọ ọsọ. Mkpakọrịta anyị na Bank mbụ na-ebelata mgbasa anyị n'ihe egwu dịka ụlọ akụ na-eburu ibu ọrụ nke ịnye ego, nyocha nke otuto, ncheta na idozi mgbazinye ego.
Nke a ga - enyere anyị aka ime ka ngwa ngwa anyị ngwa ngwa kamakwa ọ ga - ewetakwara anyị ụlọ akụ na ego maka anyị, ” kwuru Dami.
N'ime usoro ihe omume a, mmalite mmalite nlekọta ụlọ ọgwụ na-achịkwa igwe ojii Medipal nwetara nnukwu mmekorita abụọ na ụlọ ọrụ Insurtech a ma ama, Curacel (Startupbootcamp Afritech alumni) yana eTranzact- nnukwu ego nke Africa.
Nọmba ndị ahịa Medipal abawanyela ma bụrụ ndị etinyere dịka Lagos '1 Electronic Medical Record Company site n'aka ndị isi nke ụlọ ọgwụ, Association of General and Private Medical Practitioners of Nigeria.
Featured Image: offọdụ n’ime ndị mmalite na-esonye na mmemme iNOVO Accelerator
Gokada weputara Super App, mezue 1 Nde Nzipu Ihe oriri na iwu Ecommerce